गृहमन्त्री बादल चितवनमा प्रचण्ड हराउने एसपी खोज्दै ! – jagritikhabar.com
गृहमन्त्री बादल चितवनमा प्रचण्ड हराउने एसपी खोज्दै !
उनीहरुसँगै चितवन गएका नान्तीराज गुरुङलाई भने हटाइएको छैन । स्रोतका अनुसार कसलाई चितवन पठाउने भन्ने कुरा नमिल्दा उनको सरुवा नभएको हो । चितवन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको गृहजिल्ला हो । पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पनि जिल्ला हो चितवन । सोही महत्वपूर्ण जिल्लामा भने एसपीको सरुवा भएन । स्रोतका अनुसार कसलाई पठाउने भन्ने विवादमा हाल हेरफेर नगरिएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो गृहजिल्लामा एसपी सानुराम भट्टराईलाई पठाएका हुन् । ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै भट्टराई उनको पिएसओ बनेका थिए । त्यस्तै पर्सामा वेलबहादुर पाण्डे, मकवानपुरमा सोमेन्द्रसिंह राठौर, बारामा दीपेन्द्र शाही, धनुषामा प्रकाश रानाभाट, मकवानपुरमा आभूषण तिमल्सिना, काभ्रेमा भूपेन्द्र खत्री, कञ्चनपुरमा उमा प्रसाद चतुर्वेदीलाई पठाइएको छ ।